Sivanina ny famolavolana sy ny fiasa amin'ny Samsung Galaxy Watch 3 | Androidsis
Mbola kely sisa ny sisa tavela ho azy Samsung galaxy watch 3 jereo ny mazava. Ny jeneraly Koreana dia manana fotoana voatondro amin'ny 5 Aogositra, izay ahitantsika ny smartwatch vaovao, ho fanampin'ny Samsung Galaxy Tab S7 sy ny Samsung Galaxy Note 20 antenaina.
Eo am-piandrasana ny daty famotsorana, tsikelikely dia nahazo vaovao momba ny sasany aminay izahay Fampiasana an'io smartwatch Samsung io. Ankehitriny, azontsika atao ny manamafy ny endrika sy endrika mampiavaka ny Samsung Galaxy Watch 3.
Dika roa samy hafa amin'ny Samsung Galaxy Watch 3
Araka ny sary tafaporitsaka ny fisehoan'ny Samsung Galaxy Watch 3 tena tsy mitovy amin'ny teo alohany. Amin'izany fomba izany no ahitantsika ny famantaranandro nentim-paharazana izay manasongadina ny famantaran-tànana izay afaka miditra amin'ireo rindranasa sy fampiasa isan-karazany an'io akanjo io nefa tsy mila mikasika ny efijery amin'ny fotoana rehetra.
Toy ny fanao amin'ity karazana famotsorana ity dia hitantsika kinova roa 41mm sy 45mm. Mikasika ny refy, ny maodely kely indrindra dia refesina 41 x 42.5 x 11.3 mm raha ny Galaxy Watch 3 an'ny 45 mm kosa dia hanana refy 45 x 46.5 x 11.1mm.
Misy fiantraikany amin'ny haben'ny efijery io. Ao amin'ireo kinova roa no ahitantsika a Tontonana Super AMOLEDSaingy ny maodely 41mm dia mijanona amin'ny 1.2 santimetatra, raha ny kinova lehibe kokoa kosa dia hisy efijery 1.4-inch. Ho an'ny ambiny, ny maodely roa dia miankina amin'ny processeur Exynos 9110, miaraka amin'ny RAM 1 GB sy fitehirizana anatiny 8 GB.
Ny fahasamihafana lehibe hafa dia ho hita ao amin'ny bateria, satria ny maodely iray dia 247 mAh, ary ny singa lehibe indrindra dia mirehareha bateria 340 mAh. Mazava ho azy, ary ahoana no mety hisy raha tsy izany, ny fiambenana roa dia miara-miasa amin'ny Tizen OS, ny rafitra fiasan'i Samsung ho an'ny akanjo azo ampiasaina, ankoatry ny fananana fanamarinana NFC sy IP68 hahazoana antoka fa tsy olana ny rano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Sivanina ny famolavolana sy ny fiasa amin'ny Samsung Galaxy Watch 3
Quick Charge 5.0 dia mampiakatra ny finday ho 50% ao anatin'ny 5 minitra
Ny LG Vvett dia ofisialy amin'ny Snapdragon 845 sy maro hafa